Fahamarinana sy fahatokisana, Fiangonana Eran-tany manerantany Switzerland (WKG)
Manana fironana aho hamita zavatra haingana. Toa toetran'ny olombelona ny ho be zotom-po amin'ny zavatra iray, ny hanaraka azy amin-jotom-po, ary avelao hamoaka azy indray ilay izy. Nitranga tamiko izany tamin'ny fandaharan'asa fanatanjahako. Nanomboka fandaharanasa fanatanjahantena isan-karazany aho nandritra ny taona maro. Nihazakazaka aho ary nilalao tenisy tany amin'ny oniversite. Nandritra ny fotoana kelikely dia niditra tamin'ny klioba fanatanjahantena aho ary nanao fanatanjahan-tena tsy tapaka. Taty aoriana dia nanofana tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny aho teo ambany fitarihan'ny horonantsary fanazaran-tena. Nandeha an-tongotra nandritra ny taona vitsivitsy aho. Ankehitriny aho dia manofana miaraka amin'ny horonantsary ary mbola mitsangantsangana aho. Indraindray aho mampiofana isan'andro, avelako izy mandritra ny herinandro vitsivitsy noho ny antony maro, avy eo miverina aho ary saika manomboka manomboka indray.
Nataon'i AW Tozer izao fomba izao: Hamafisiko ity adidy iray ity, ity asa lehibe ity, izay mahatonga ny fikasan'ny fo hijery an'i Jesosy mandrakizay. Andriamanitra dia manaiky io tanjona io ho safidintsika ary mandinika ireo fanelingelenana maro mahakasika antsika eto amin'ity tontolo ity. Fantany fa nampifanarahintsika tamin'I Jesosy ny làlan'ny fontsika, ary azontsika atao koa ny mahalala sy mampionona ny tenantsika amin'ny fahalalana fa ny fahazaran'ny fanahy izay mamorona fa rehefa avy ny fotoana iray dia lasa karazana fandanjalanjana ara-panahy izay tsy mahatsiaro tena Ny ezaka dia mitaky bebe kokoa amin'ny lafiny ataontsika (The Pursuit of God / p. 82).